ဇူလိုငျ 13, 2018 – Healthy Life Journal
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးချိန် ဘာတွေ ရှောင်ရမလဲ
မေး။ ။ မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးချိန်မှာ မိခင်က ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ ၀င်းမေ၊ ကျောက်တံတား ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ အစားအသောက်အစုံမျှတအောင် စားရပါမယ်။ ရှောင်သင့်တာတွေက ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရောဂါ (၁) (Gestational Diabetes Mellitus)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို အစောဆုံး ကာကွယ်ကုသကြဖို့ ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည်အသီးသီးက ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဘာလင်ကြေညာစာတမ်းနဲ့ စတင်ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါမှာ လူတွေသတိမမူ၊ ဂရုတစိုက် မဆောင်ရွက်ကြလို့ ကုသရာမှာနောက်ကျနေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါ တစ်မျိုးကတော့ Gestational Diabetes Mellitus (GDM)...
ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့ပြီလေ . . .
လူတစ်ယောက် ရေချိန်ကိုက်ပြီး ကားကို အမြန်မောင်းလာစဉ် လူနှစ်ယောက် ကားတားနေသဖြင့် ရပ်ပေးလိုက်ပြီး လှမ်းပြောသည်။ “ကားကြုံလိုက်မလို့လား . . . ဒါနဲ့ အစ်ကိုတို့ နှစ်ယောက်က အမြွှာညီအစ်ကိုတွေလားဟင်” “ဟမ် . . . အမြွှာ မဟုတ်ပါဘူး၊...
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် စားသင့်သည့် အနီရောင်အစာ ၅ မျိုး
နှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက် စားသင့်တဲ့ အနီရောင်အစာ ငါးမျိုးရှိပါတယ်။ (၁) ခရမ်းချဉ်သီး (၂) ငရုတ်ပွသီးအမှည့် (အနီရောင်) (၃) အနီရောင်စပျစ်သီး (၄) စတော်ဘယ်ရီသီး (၅) ချယ်ရီသီး (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ် Healthy...